Baluster mahitsy, baluster vy, baluster metaly - Primewerks
Balusters vy / Spindles
Voninahitra ho anay ny manana ity fahafahana ity hizara aminareo kely ny tantaranay, Primewerks (Xiamen) Industry and Trade Co., Ltd. Orinasa Singaporeana niorina tamin'ny taona 2005. Nanomboka tamin'izay fotoana izay, dia mpanamboatra kojakojan-tohatra vita amin'ny vy izahay.
Ahoana ny fomba hanesorana ny harafesina amin'ny tady vy?
1. Fanalana harafesina amin'ny tanana: Mampiasa fitaovana tanana toy ny taratasy vy, kikisana, spatula ary borosy tariby.Ity fomba ity dia ny hamafin'ny asa avo, ny fahombiazan'ny famokarana ambany, fa ny fandidiana tsotra sy malefaka, dia mbola raisina.2. Fanalana harafesina ara-mekanika: Mampiasa ny fiantraikan'ny herin'ny mekanika sy ny f...
Firy ny elanelana misy eo amin'ny railings no tena azo antoka?
Ny railings dia ampiasaina matetika amin'ny fiainantsika, misy elanelana eo anelanelan'ny railings, ary inona no tokony ho elanelana azo antoka eo amin'ny railings amin'ny fotoana samihafa?1. Karazana railings: Ny fepetra takiana amin'ny railings samy hafa dia azo antoka fa samy hafa.Ary ny railings dia azo zaraina amin'ny ...
Fampidirana ny fomba fanaovana sparaying railing vy mahazatra
Fampidirana ny fomba famafazana railing vy mahazatra Ny fomba lokon'ny railings vy dia azo zaraina amin'ny fomba fanondroana loko profil, fomba extrusion composite, fomba fametahana sarimihetsika ary manaikitra ara-dalàna.1) Fomba Extrusion Profile loko.Antsoina koa hoe extrus-body manontolo...
AFAKA Mifandraisa aminay ETO
Telefaonina birao: +86 (592) 6069078
Telefaonina finday/Whatsapp/Wechat: +86-13400823290
Adiresy: Room A-410, No.1647 Xinglinwan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, Sina.